မာရသွန်ခရီးသည် သူပုန်ကျောင်းသား ပြောစကား ~ Htet Aung Kyaw
Life in Media
Life in ABSDF
Htet Aung Kyaw
Htet Aung Kyaw @ Win Htein was born in 1964 in Tavoy (Dawei), southern Burma. He went to Tavoy College and Moulmein University for study Burmese Literature.(There is no journalism in Burma at the time). He becameamember of ABSDF (All Burma Students' Democratic Front) after military coup in Sept 18, 1988. He worked 12-years for the ABSDF and 15-years for DVB (Democratic Voice of Burma). He is nowaFreelance journalist. He publishedabook called "Far from Home: 20 Years in Exile" in Thailand in 2008. Five years later, he publishedanew book called "Marathon Journey of A Student Rebel" in Burmese at Yangon on May, 2013. He is now writinganew book on his life with DVB. To be publish soon. You can reach him at winhtein201@gmail.com ...................... ကျနော်ရဲ့ blogဆီ လာရောက်ကြည့်ရှု သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ABSDF တောတွင်း ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလမှာ စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ နော်ဝေးအခြေစုိုက် DVB အသံလွှင့် ဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းစဉ်က အတွေ့အကြုံတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖုို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဝေဖန်ချက်၊ အကြံပြုချက်များကို ကြိုဆုိုလျှက်... အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့် ထက်အောင်ကျော်
မာရသွန်ခရီးသည် သူပုန်ကျောင်းသား ပြောစကား
9:42 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့  မာရသွန်ခရီးစာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဟောင်း၊ သတင်းသမား ကိုထက်အောင်ကျော်နဲ့ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွင်း အတွေ့အကြုံများနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေကို ဗွီအိုအေဝိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကိုထက်အောင်ကျော် လာပြီးတော့ တကူးတက တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတာကို ဗွီအိုအေ က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုထက်အောင်ကျော်ရဲ့  နောက်နံမည်တစ်ခုက ကိုဝင်းထိန်။ ကိုဝင်းထိန်က နံမည်အရင်းပေါ့။ ဒီ သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့  မာရသွန်ခရီးစာအုပ်က ပြီးခဲ့တဲ့ မနေ့ကစပြီးတော့ ဖြန့်တယ်လို့ ကျနော် သိထားတယ်။ ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုထက်အောင်ကျော် ရေးတာလဲ။ ဒီမှာလည်း ABSDF ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့။ ဒီ စာအုပ်မျိုးက လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်ကဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်မယ်ဆိုရင် အိမ်မက်တောင် မက်လို့မရတဲ့စာအုပ်မျိုး။ ဒီမှာ ABSDF ခေါင်းစဉ်လည်းပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က သူပုန်ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့  မာရသွန်ခရီးဆိုတော့ တော်တော်ပြေးထားတဲ့ သူပုန်ကျောင်းသားတစ်ဦးပေါ့။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ရေးပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီတာလဲ။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ အဓိကတော့ ကျနော်တို့ အခု (၂၅) နှစ်ရှိပြီပေါ့။ (၂၅) နှစ်မှာ ဒီကိုပြန်ရောက်တယ်။ (၂၅) နှစ်မှာ ကျနော်တို့ ပြန်လာနိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော် အဝေးကိုရောက်သွားခဲ့ပေမယ့် ပြန်လာနိုင်တယ်။ ဒီထဲမှာ ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့လူတွေ။ အဓိက ဘယ်တော့မှ ပြန်လာခွင့်မရတော့တဲ့ (၅၀၀) ကျော်လောက်ရှိမယ်။ (၅၆၀) လောက်ရှိမယ်။ အဲဒီလူတွေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် မဖြစ်စေချင်ဘူး။ အဲဒီလူတွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ သေချာရှိစေချင်တယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲဒါပါ။ ပြီးတော့ ဒုတိယကတော့ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆိုတာ။ ကျနော်တို့ မပြန်လာခင်ကတည်းက မြောက်ပိုင်းကိစ္စတို့၊ ဘာတို့ စာအုပ်တွေ ထုတ်ထားတော့။ လူတွေက ABSDF ဆိုတာ မြောက်ပိုင်းနဲ့ ရောရောပြီးတော့ မြင်တာပေါ့။ တကယ်ကတော့ အခုန ကျနော်ပြောတဲ့ ပြန်လာခွင့်မရတော့တဲ့ လူတွေက လုံးဝပေးဆပ်သွားတယ်။ အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ ပေးသွားတဲ့လူတွေ၊ ဒီလူတွေကို ကျနော်က ဂုဏ်ပြုချင်တယ်။ တောထဲမှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောချင်တာပေါ့။ အဲဒါပါ။ အဓိကတော့ ပြန်လာခွင့်မရတော့တဲ့ လူတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့၊ အဲဒီအနေနဲ့ အဓိကထုတ်တာပါ။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ပြန်လာခွင့် မရတော့တဲ့လူတွေဆိုတာ ၈၈ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အရေးတော်ပုံကြီး။ ဒီလို လှုပ်ရှားမှုကြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီးတော့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဆိုပြီး နယ်စပ်အသီးသီးကို ထွက်သွားတယ်။ နောက်တခါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (မကဒတ) အင်္ဂလိပ်လို ABSDF ဒီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်။ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ကျဆုံးသွားကြတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကွယ်လွန်သွားကြတာတွေရှိတယ်။ ဒီလူတွေ အခုနပြောတဲ့ ၆၀၀ ကျော်လောက်။ ဒီလူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်း။ တခါ ကိုထက်အောင်ကျော် စာအုပ်ထဲမှာ ကျနော်တွေ့တာက ABSDF နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြုစုတဲ့နေရာမှာလည်း အုတ်တချပ် သဲတပွင့် ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပါတယ်။ အဲဒါ အခုနပြောသလို မြောက်ပိုင်းကိစ္စလောက်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ ABSDF ကို လူတွေသိနေတာအပြင် တခြား ဘယ်လိုစိတ်ကူး၊ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး ပေးချင်တဲ့သတင်းစကား ပါသေးလဲ။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ ဆိုလိုတာက အခုနရှေ့ မှာ ပြောခဲ့သလို အခု ကျနော် ဒီမှာတွေ့တော့ ဥပမာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့လိုမျိုးကအစ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပြောတော့ ခင်များစာအုပ် မြောက်ပိုင်းကိစ္စပါလားဆိုတော့ အဲဒါတော်တော် ဟိုဟာဖြစ်တယ်။ သူတို့လိုအဖွဲ့မျိုးက ဒီမြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ ABSDF ကို သူတို့ကတော့ ရောမြင်တာမဟုတ်ဘူး၊ မြောက်ပိုင်းကိစ္စပါရင် သူတို့ သိပ် .. ပြောချင်တဲ့ဟာမရှိဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အခါကြတော့ ပထမအချက်က လုံးဝ … မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကာလတခုမှာ incident ဖြစ်တဲ့ဟာ။ မှားတာမှန်တာ ရှိမှာပေါ့။ ကျနော် အဲဒါကို မဆိုလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ABSDF (၂၅) နှစ်ရှိပြီ၊ အဲဒါက အစိတ်အပိုင်းလေးတခု။ မှားရင် တာဝန်ရှိတဲ့ဟာ သူဟာသူ ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်။ အဲဒါကတပိုင်း။
ဒီဟာကြီးက တော်လှန်ရေးတခုလုံးမှာ လူ (၅၀၀) ကျော်သေသွားတာ၊ အလကားတော့ သေသွားတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ် ယုံကြည်ပြီးတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် ပေးဆပ်သွားတဲ့လူတွေ။ အဲဒါကို ကျနော် အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ နောက်ရည်ရွယ်ချက်က စိတ်ကူးရှိတယ်။ အခုဆိုရင် (၂၅) နှစ်တော့ရှိပြီ။ ဒါပေမဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာအနေနဲ့ လုပ်ဖို့ရာ ABSDF ဗဟိုကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုထိလုပ်တာ မတွေ့ရသေးဘူး။ ကျနော်တို့ရှေ့ မှာ ဗကပ - ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ပြည်သူ့ပြည်ချစ်ပါတီနဲ့ ရှေ့ မှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်။ သူတို့တတွေလည်း အခုဆိုရင် တယောက်ချင်းရေးတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ ဦးတင်မောင်ဝင်း ရေးတာမျိုး။ ဒါပေမဲ့ တဖွဲ့လုံးအနေနဲ့၊ နိုင်ငံအနေနဲ့ အဲဒီလိုမျိုး ရေးတာမျိုးက သေသေချာချာ လုပ်တာမျိုး မရှိဘူး။ ကျနော်က အဲဒါမျိုး လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တယောက်တည်းအနေနဲ့ လုပ်ရတာ၊ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို ရေးတာတော့ ရတာပေါ့။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သုတေသနအဖွဲ့တွေ၊ နောက် Peace Center လို အဖွဲ့မျိုးတွေက တကယ် စနစ်တကျ လုပ်သင့်တဲ့ဟာမျိုးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဟာက အုပ်တချပ် သဲတပွင့်နဲ့ - ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလိုမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင် ဝိုင်းကူးလို့ရတာပေါ့။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ။ အဓိကတော့ မြောက်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အဲဒီ ABSDF ထဲကပဲ ကိုယ့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းထဲက သူလျှို (MI) အဲဒီအချိန်တုန်းကဆို ထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး သံသယနဲ့ စွပ်စွဲပြီးတော့ဖမ်းတယ်၊ နှိပ်စက်တယ်၊ ညဉ်းပမ်းတယ်၊ သေတဲ့လူတွေသေသွားတယ်။ တချို့ တွေလည်း ထွက်ပြေးပြီးတော့ လွတ်ကြတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ကိုထက်အောင်ကျော် က ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်အထိ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့လူ။ ကိုထက်အောင်ကျော် တယောက်တည်းရဲ့ အမြင်။ လက်ရှိမှာ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်၊ တာဝန်ရှိတဲ့လူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျနော် နားလည်းတယ်။ သို့သော် ကိုထက်အောက်ကျော် က ဒီအဖွဲ့မှာ ပါခဲ့တဲ့လူ၊ တာဝန်ရှိတဲ့လူ တယောက်ဖြစ်ခဲ့လူဆိုတော့ ဒီမြောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ကိုထက်အောင်ကျော် တယောက်တည်းရဲ့  အမြင်ကို ကျနော်သိချင်တယ်။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ တယောက်တည်းအမြင်တော့ အဲဒီဖြစ်တာက ၉၂ လောက်။ ABSDF ကွဲတာ ၉၁ နှောင်းပိုင်းလောက်။ နှစ်ကူးလေးမှာ။ တတိယအကြိမ် ညီလာခံမှာကွဲတာ။ ကွဲတဲ့အကြောင်းပြချက်ထဲမှာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စလည်းပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းဆိုတာ အခုနကိစ္စတွေ။ မြောက်ပိုင်းကိစ္စပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဒေါက်တာနိုင်အောင် နဲ့ ကိုမိုးသီးတို့ အုပ်စုကွဲကြတယ်။ ဟိုဘက်ကလည်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်တို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ဟိုဘက်ကလည်း အဲဒီကာလက ကိုမိုးသီး က ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ သူမှာတာဝန်ရှိတယ်။ ဘယ်မှာတာဝန်ရှိမှန်း -- ကျနော်က ဗဟိုလည်းမပါဘူး။ တောင်ပိုင်းမင်းသမီးစခန်းမှာပဲရှိတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကွဲတဲ့အထဲမှာ အဲဒီအကြောင်းပါတယ်လို့ သိရတယ်။ နောက် သူတို့စစ်ဆေးထားတဲ့ သူလျှိူ .. သူတို့အခေါ်။ စစ်ဆေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုအခွေတွေ ကျနော်တို့ဆီလည်း ရောက်လာတယ်။
ကွဲတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်က ဘယ်ဖက်မှမပါဘူး။ ကျနော်တို့က ဘက်မလိုက်ဆိုပြီးနေခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းက (၃) ခြမ်းကွဲသွားတယ်။ ကိုနိုင်အောင် ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့၊ ကိုမိုးသီး ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့၊ ဘက်မလိုက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ အင်အား (၂၀၀) လောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ဆီပို့တော့ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကာလက ဘယ်လိုပြောမလဲ သိပ်လည်းမသိဘူး၊ သိပ်လည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကချင်ဒေသက အဝေးကြီးဆိုတော့၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့က တနင်္သာရီမှာနေတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့နဲ့ အဝေးကြီး။ နောက်တခါ ဗဟိုကဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ကျနော်တို့က ဘက်မလိုက်၊ သီးခြားဆိုတော့ ကျနော်တို့လည်း တာဝန်မရှိဘူး။ အဲဒီတုန်းက သိပ် seriously မဖြစ်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက ဒီကိစ္စရပ်ကြီး ဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း ထင်မထားဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟိုဘက်မှာဖြစ်တာ သူ့တာဝန်သူရှိတယ်။ ဒီလောက်ကြီး ကျနော်တို့ အဲဒီတုန်းက အလေးအနက်မရှိခဲ့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းကျမှ … အဲဒီတုန်းက ဘယ်သူမှ မပြောကြဘူး။ ၉၂ လောက်မှာ ကျနော်ထင်တယ် Nation တို့ဘာတို့ Yindee တို့ဘာတို့ ရေးတာကိုတွေ့တယ်။ ဒီလိုပဲ ဒီဟာကိုပြောရင် သူတို့အခေါ်တော့ ရန်သူပေါ့။ စစ်အစိုးရအကြိုက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောကြဘူး။ နောက်ပိုင်း အခုကျမှ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁) (၂) ကျမှ ပြန်ပြီး သတင်းထွက်လာတာ။ ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ အဲဒီတုန်းကာလကတော့ သိပ်ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မဆိုင်တဲ့အတွက် သိပ်တာဝန်မရှိဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ ထင်ထားတာပေါ့။ အခုကျတော့ ကိုယ်ကလည်း အဲဒီမှာ တပ်ဖွဲ့တယောက်၊ တာဝန်ရှိသူတယောက် ဖြစ်ခဲ့တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ တာဝန်မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ဆိုင်တာပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီလိုပြောလာတယ်။ သူတို့ဖြစ်စဉ်တွေလည်း ပြန်ရေးပြီဆိုတော့ ABSDF ကလည်း ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ ကျနော်သိရတယ်။ ဒီကိစ္စကိုတော့ အဖြစ်မှန်အတိုင်း ပေါ်အောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ တာဝန်ရှိတာကို အရေးယူတာမျိုးတော့ ကျနော်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အခုနပြောသလို ကိုထက်အောင်ကျော် က တောခိုတယ်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံမှာပါတယ်။ တောခိုတယ်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲ ပါခဲ့တယ်။ တာဝန်ရှိသူတယောက်အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ တခါ အဲဒီကနေပြီးတော့ သတင်းသမား၊ သတင်းလောကထဲ ရောက်တယ်။ ကျနော် သိသလောက် ကိုထက်အောင်ကျော် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာအသံ (DVB) မှာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာ သတင်းထောက်သမားတဦးအနေနဲ့ လုပ်ခဲ့တယ်။ ထက်အောင်ကျော်ဆိုတဲ့ အသံကိုလည်း လူတွေက လေလှိုင်းထဲကနေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားခဲ့ရတယ်။ ရုပ်သွင်ကိုလည်း ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ သတင်းသမားအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်။ ဆိုတော့ အခု ကိုထက်အောင်ကျော် ပြန်လာတာ (၂၅) နှစ် မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်သွားပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်ရောက်တာပေါ့။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်ရောက်တော့ ပြန်လာရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်လေး။ အခုဆိုရင် တော်တော်များများ ပြန်လာကြပါတယ်။ ပြန်လာခွင့် အခြေအနေမသာသေးတဲ့လူတွေလည်း အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ ကျနော် ပထမဦးဆုံး စိတ်ဝင်စားတာက ကိုထက်အောင်ကျော် ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ အဲဒါကို ကျနော် နည်းနည်းသိချင်တယ်။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ စိတ်ခံစားမှုကတော့ ပထမဦးဆုံး သူများတွေပြန်တုန်းက ကျနော် ဆောင်းပါးတွေ ရေးပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ် တောခိုတယ်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်မယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြောင်းလဲပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်အောင် ကျနော်တို့က ဦးဆောင်ပြီးတော့ အပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ပေါ့။
အဲဒီတုန်းကတော့ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာမယ်ပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ဝင်သလိုမျိုး။ ဒါပေမဲ့ တော်လှန်ရေးတခု အောင်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ အမှန်တရားဘက်မှာ ရပ်နေရုံ၊ ယုံကြည်ချက်ရှိရုံ၊ ပေးဆပ်ရုံနဲ့ မရဘူး။ အချက်အလက်တွေ အများကြီး တော်လှန်ရေးတရပ် အောင်ဖို့အတွက်။ အချက်အလက်တွေ အများကြီးလိုလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီ အချက်အလက်တွေ မပြည့်စုံတဲ့အတွက် အောင်ပွဲမရသေးဘူးလို့ ပြောရမယ်။ မရခဲ့ဘူးလို့ မပြောချင်ဘူး။ မရသေးဘူးပေါ့။ အခြေအနေက ပြောင်းသွားတော့ ကျနော်တို့ ဒီလိုပြန်လာရတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော် ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းရောက်တော့ ကျနော်ကို လာကြိုတဲ့၊ တောထဲက ပြန်လာတဲ့လူတွေပါ။ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်လာမယ်။ အခုတော့ အောင်ပွဲမရဘဲ ပြန်လာရတော့ ကျနော်စိတ်ထဲမှာတော့ feeling ကတော့ အဲဒါပဲ။ အိမ်ကနေ ထွက်သွားစဉ်က ဒီလိုမျိုး ပြန်လာဖို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အခြေအနေအရ ဒီလို ပြန်လာရတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ အောင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်မလာနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ feeling ကျေနပ်မှု သိပ်မရှိဘူး။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အခုန ပြောသလို အောင်ပွဲနဲ့အတူ ပြန်မလာနိုင်ဘူး။ အောင်ပွဲပန်းကုံးတွေ စွပ်ပြီးတော့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ကြွေးကြော်တဲ့လူတွေ မရှိဘူး။ အဲဒီ အခြေအနေအောက်မှာ လက်ရှိသွားနေတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့ အခင်းအကျင်း၊ အခြေအနေကို လက်ခံနိုင်သလား။ ဒီအပေါ်မှာ ကျေနပ်သလား။ ဒီအခြေအနေက လက်ရှိသွားနေတဲ့၊ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ လက်ခံနိုင်သလားဆိုတော့ ကျနော်တို့က လက်မခံလည်း သူတို့က သွားနေတယ်ဆိုတော့။ ကျနော် လက်ခံလား၊ လက်မခံနိုင်သလားဆိုတော့ တယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ အစောကပြောသလို လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ်က ကျနော်တို့ သွားချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့ ဒီနေ့ သွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ မတူဘူး။ လက်တော့မခံချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်မခံချင်ပေမယ့် သူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအစ သူ့လမ်းကြောင်းမှာ ဝင်ပါတဲ့အခါကြတော့ ကျန်တဲ့လူတွေက ကာလတခုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပါမှ ရမယ်လို့ မြင်တယ်။ ပြီင်္းတော့မှ ကာလတခုရောက်တဲ့အထိ မရဘူးဆိုရင် သူရဲ့  choice ပေါ့။ ဆိုတော့ ကျေနပ်လားဆိုတော့ လက်ရှိ အပြောင်းအလဲက တကယ်တော့ စစ်အစိုးရ၊ အခုတော့ စစ်အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ စစ်အစိုးရကနေ ပြောင်းသွားတဲ့ စစ်တပိုင်း အစိုးရနောက်ကို opposition က လိုက်သွားရတာ။ ကျနော်က အရင်က စိတ်ကူးတာ opposition, democratic force တို့ သွားတဲ့နောက် အစိုးရစစ်တပ်က လိုက်ရမှာ။ စစ်တပ်နဲ့ အရင်က အစိုးရတွေက လိုက်ရမှာ။ အဲဒါမှ ဒီမိုကရေစီက ရမှာ။ အခုက စစ်တပ်ကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဒီမိုကရေစီနောက်ကို လိုက်ရတော့ ပန်းတိုင်က ဘယ်တော့ ရောက်မလဲ ကျနော် မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာ ဒီဟာပဲ ရှိနေတော့ ဒီ process မှာ ဝင်ပြီးတော့ ဝင်ပါရတဲ့သဘောလို့ နားလည်းပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ဆိုလိုတာက ကိုထက်အောင်ကျော်တို့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူ၊ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ။ ဒီ အင်အားစုတွေက စပြီးတော့ ဖော်ဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ကိုယ်တချိန်တုန်းက ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့၊ တချိန်တုန်းက ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အင်အားစုကနေ စပြီးတော့ ဖော်ဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲနောက်ကို လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေအောက်မှာ ကိုထက်အောင်ကျော်က ကိုယ့်ရဲ့  အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ထားသလဲ။ ပြည်ပမှာပဲ တသက်လုံး အခြေစိုက်သွားပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးပဲ ပြန်လာလိုက်၊ ဒီလိုမျိုး စာအုပ်လေးရေးလိုက်။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေးလုပ်လိုက်။ တချိန် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အခြေစိုက်လုပ်ဖို့ ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်ရဲ့  အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုမျိုး ပုံချထားသလဲ။
ကိုထက်အောင်ကျော် ။ ။ အဲဒါကတော့ အခု ဆုံးဖြတ်ချက် မချရသေးဘူး။ အခုဟာက လေ့လာရေးခရီးစဉ်။ ကျနော့်ရဲ့  (၂၅) နှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ်ဆိုတော့ အခု ဒီခရီးစဉ်မှာ လေ့လာပြီးတော့ ကျနော် ဘာလုပ်လို့ ရမလဲ။ လုပ်ချင်တာကတော့ မီဒီယာ။ (၂၅) နှစ်ကြာသွားပြီး အစက တောခိုပြီး အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ (၂၅) နှစ်မှာ မီဒီယာကို ၉၅ က စတယ်ဆိုတော့ နှစ်တွေအများကြီး (၁၇) နှစ်လောက် ရှိသွားပြီဆိုတော့ ဒီအလုပ်က ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်လို ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ ဒီဟာပဲ လုပ်ချင်တဲ့သဘော ရှိတာပေါ့။ နိုင်ငံရေးကတော့ လောလောဆယ်တော့ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ဖို့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကာလတခုရောက်တဲ့အခါမှာ မပြောတတ်ဘူး။ လိုအပ်ချက်အရ ဖြစ်လာရင်တော့ ဝိုင်းကူးပေးတဲ့နေရာမျိုးတော့ လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Media professional ပဲ ကျနော် လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဟိုမှာနေဖို့တော့ မရှိဘူး။ ဟိုမှာက ခဏဆိုပြီး ထွက်သွားတာ (၂၅) နှစ် ကြာသွားတာ။ ဒီမှာက (၂၄) နှစ်က ထွက်သွားတယ်၊ (၂၅) နှစ်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ ဒီမှာပဲ ပြန်နေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေလို့ရလား၊ မရလား အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ကျနော် လေ့လာရပါမယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in: ABSDF,BOOK,LIFE IN MEDIA
သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ABSDF လက်မှတ်ထိုးဖွယ်ရှိ
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၁၁)
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၁၀)
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (၉)
အာဇာနည်ကုန်းမှာ ဘာမှတ်တမ်းမှ မရှိပါ
သူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ် (၈)
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ် ၄
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ် ၃
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ် ၂
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ် ၁
IN ENGLISH (26)
LEARNING MEDIA (167)
LIFE IN MEDIA (150)
Copyright © 2011 Htet Aung Kyaw | Powered by Blogger